Rikooo zvaJehovha Aircrafts hapana mabasa mu prepar 3d v4
mubvunzo Rikooo zvaJehovha Aircrafts hapana mabasa mu prepar 3d v4
1 gore 8 ago #643 by brunoeduardo
Vamwe nhau kuti itsva shanduro prepar 3d v4?
1 gore 8 ago #663 by Howlak
Nyaya huru haisi yakarurama, inoratidzika seyese ndege yeRioo FSX isingashande .:
Rikoo haasi wekugadzirisa wekutanga we addons. Nhamba dzakawanda dzeFSX NATIVE dzinoshanda muP3D V4, ingave yepakutanga kana inoenzaniswa neRioo. Asi FS9 inotakura ndege haina kushanda.
1 gore 7 ago #667 by Macca22au
Vakomana, vashomanana kana vasina FSX kana FS2004 ndege ichashanda muP3Dv4.
Nzira huru yeP3d v3, kunyanya ndege dzakaoma uye FMC hadzisi kushanda muP3D4
Imba ye 64bit yeP3D4, inoreva kuti dzimwe ndege, nzvimbo nezvimwe zvinoda zvimwe shanduko kuti zvienderane.
Ndinokurudzira vanyori vezvizhinji zvekutsvaga pano kuti vashande pakuvandudza mawedzera avo.
1 gore 5 mazuva apfuura #946 by DRCW
Kunyange kunyange Chris Evens akafungidzira zvose zvaanoita uye haasi paanosunungura ndege iyo inonzi inoshanda muV4. Kunzwisisa izvozvi, unofanira kubvumira kuti zvikwata izvi zviitwe, imwe neimwe. Dzimwe ndege dzichashanda asi vamwe vasingaiti, ndicho icho chiri nyore. Bvisa chero chipi zvacho chisingashandi uye chiri kukonzera kuparara. Mirira zvishomanana, uverenge maforamu, uye tarisa avo vanozvitsaurira upenyu hwavo kuti vawane rusununguko, edza kuti mishonga igadzikane. Zvizhinji zvezvikanganiso izvi zviri mukushandurwa kwekodeti inotora P3D kubva ku32 bit kusvika ku64. Pakupedzisira zvichave zvakakosha. Zvimwe zvipfeko FSW ... Mafaira ezvinyorwa anoita sevose vanoshanda muP3D v4. Ndakanga ndakwanisa kutora zvose zvangu zvemafirimu. Izvo zvinokonzerwa nemafuta epasi hazvisi chinhu kunze kwemashoko apo ndege dzinowanzobatanidzwa mukushanda uye mazano.